CEO အပတ်စဉ် စာမျက်နှာ – NYDC
ရန်ကုန်မြို့သစ်ကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာဆန်းစစ်ရေးနယ်နိမိတ်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ NYDC အနေနဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းမှစတင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုတွေအရ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို နည်းစနစ်ကျကျ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ မဟာဗျူဟာမြောက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း (Strategic Environmental Assessment -SEA) ကို ပြုလုပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Environmental Resource Management (ERM) ကို ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ(၆)ရက်နေ့မှာ NYDC ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် Townhall ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ချို့လည်း လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသလို တစ်ချို့လည်း NYDC Facebook စာမျက်နှာကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲဟာ တက်ကြွပြီး အသက်ဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကို ကြားသိခဲ့ရတဲ့အပြင် စီမံကိန်းထောက်ခံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မြို့သစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်း ကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အမြင်ကွဲပြားမှုများ အခုလို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများဟာ ဒီစီမံကိန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော် ကတည်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ NYDC တို့ ဂရုတစိုက်နဲ့ သေသေချာချာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့
ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၆)ခုအတွက် တင်သွင်းထားသော EOI များ
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၆)ခုအတွက် NYDC Challenge Tender ပထမအဆင့်စတင်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုမှုအဆိုပြုလွှာ (Expression of Interest – EOI) ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးတင်သွင်းရက်က ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများက စိတ်ပါဝင်စားစွာ EOI တင်သွင်းကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်ပထမအဆင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၆)ခုအတွက် EOI တင်သွင်းမှုစုစုပေါင်း (၇၇) ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီအလိုက် တင်သွင်းမှုစုစုပေါင်းကို အောက်မှာ ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။ 1) Power
NYDC ရဲ့ ပထမဆုံး Town Hall ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် (၉)လတာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အခုအချိန်အထိ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းရဲ့ တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကို စီမံကိန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် အများပြည်သူတွေ သိရှိရအောင် ဒုတိယအကြိမ် Town Hall ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Town Hall ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့် Panelists များက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာလည်း သိလိုတဲ့မေးခွန်းများကိုလည်း
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Master Plan အပြီးသတ်အဆင့် တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း (Final Master Plan Presentation) ပွဲအပြီးမှာ သတင်းမီဒီယာနဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ အမြင်အချို့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ တော်တော်များများက NYDC ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် NYDC ရဲ့ စီမံကိန်းတိုးတက်မှုတွေ၊ စီမံကိန်းတည်ရှိရာ ဒေသခံများနဲ့ တွေဆုံမှုတွေနဲ့ အများပြည်သူများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေကို ကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ထားတဲ့ အမြင်တွေနဲ့
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း Master Plan အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း (Strategic Environmental Assessment-SEA)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Environmental Impact Assessment – EIA) တွေကို NYDC နဲ့ အကြံပေး Environmental Resources Management (ERM) အဖွဲ့တို့ ပူပေါင်းပြီး စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ERM အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Independent Sustainablity ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၉၀ နှစ်တွေထဲက စတင်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာမြောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း (SEA) ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့သစ်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရာမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်
NYDC မှ ရန်ကုန်မြို့သစ်အဆင့်(၁)ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် NYDC Challenge ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းအဆင့်ကို ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုမှုအဆိုပြုလွှာ (Expression Of Interest – EOI) ခေါ်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ EOI ခေါ်ယူသွားမယ့် ကဏ္ဍတွေကတော့ 1) Power Supply and Distribution 2) Public Transport System 3) Cyber Connectivity Infrastructure 4) Municipal Waste
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း ပို့သအပ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကို အကောင်းဆုံးစတင်နေပြီလို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ NYDC အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကို အလွန်အရေးပါတဲ့ မှတ်တိုင်သစ်တစ်ခုနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်ရဲ့ Master Plan ပထမအဆင့်နဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (visioning workshop) ကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းတို့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ NYDC နဲ့ သက်ဆိုင်သူများနှင့်
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာ ကျေနပ်အားရစရာ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ National Development and Reform Commission of China (NDRC) ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Ning Jizhe ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ခရီးစဉ်အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်က လာရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ရေကြီးရေလျှံမှုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မုတ်သုံဝင်ခါနီးတာနဲ့အမျှ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေဟာလည်း ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာလည်း မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြို့ပြစီမံကိန်းကိုရေးဆွဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာနဲ့ အိမ်ယာစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူတွေ ဘယ်သူမဆို နေရာတစ်ခု၊ မြို့သစ်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ ရေလွှမ်းမိုးနိုင်မှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို နားလည်ထားဖို့ ...
လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများပြည့်စုံမှု၊ သန့်ရှင်းမှု နှင့် ပြည့်စုံသော နေထိုင်ရန် အဆင်ပြေကောင်းမွန်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဆီသို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့ပေါင်း ၁၄၀ ရဲ့ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်မြင့်မားမှုကို တိုင်းတာစာရင်းပြုစုထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေလို့အဆင်ပြေကောင်းမွန်ဆုံးမြို့များဆိုတဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို The Economist Intelligence Unit အဖွဲ့က နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီမြို့များကို တည်ငြိမ်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထား၊ ပညာရေး၊ ...
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ကိုဘာလို့ အကောင်အထည်ဖော်ရတာလဲ မင်္ဂလာပါ။ New Yangon Development Company မှာ ဒုဥက္ကဌ နဲ့ CEO တာဝန်ယူထားခွင့်ရတဲ့အတွက် အင်မတန်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်တဲ့ New Yangon Development Company (NYDC) ကိုတည်ထောင်ပြီး ရန်ကုန်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းမှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့်အကြောင်းတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အားပေးကူညီနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစိုးရက အစိုးရအလုပ်မလုပ်ဘဲ ဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာလဲ? New Yangon Development Company လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီထူထောင်ပြီး စီးပွားရေး ဝင်လုပ်ဖို့လိုလား? ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက စီးပွားရေးအင်ပါယာ ထောင်မလို့လား? ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက New Yangon Development Company ထူထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ခုနကမေးခွန်းတွေ မေးနေကြပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ ...
NYDC Challenge ရဲ့ ပထမအဆင့်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း NYDC Challenge ဆိုတာ မျှတတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ထိရောက်မှု ရှိအောင်လုပ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ Swiss Challenge အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ တင်ဒါစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ NYDC Challenge ရဲ့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အရည်အချင်းပြည့်မှီတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စီမံကိန်းအကြိုအဆိုပြုလွှာ (Pre-Project Documents-PPD) ကို တင်သွင်းဖို့အတွက် ဒီမူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို ...
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်(၂)သန်း ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲ မင်္ဂလာပါ။ ပျှော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာ အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်(၂)သန်းကို ဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ထူထောင်ကြောင်းကြေငြာတဲ့အခမ်းအနားမှာ ရန်ကုန်တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် လုပ်သားအင်အားများစွာလိုအပ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အသစ်များစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာ ...
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို တည်ထောင်ရာမှာ ချေးငွေယူဖို့ ဘာကြောင့်ဦးစားမပေးတာလဲ
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို တည်ထောင်ရာမှာ ချေးငွေယူဖို့ ဘာကြောင့်ဦးစားမပေးတာလဲ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ပေါ်ထွက်လာကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာ ပထမအဆင့် လုပ်ဆောင်မှု အနေနဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရေးကို အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်မယ့် အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကတော့ လယ်သမားများအတွက် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ရွာ(၅)ရွာ ၊ စက်မှုဇုန်ဧရိယာ၊ တံတားနှစ်စင်း၊ ...
Pre-Project Documents ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေ
Pre-Project Documents ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေ ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာ NYDC Challenge တင်ဒါခေါ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Pre-Project Documents (PPD)ကို အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ New Yangon Development Co.,Ltd နဲ့ China Communications Construction Company Ltd (CCCC) တို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေတာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ PPD မှာပါဝင်တဲ့ ...
မြို့သစ်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခုရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ (NYDC) ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု၊ ဘတ်ဂျက်၊ အသုံးစရိတ်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ NYDC အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်ရန် မရှိပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်က မြို့သစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်(၂)သန်း ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံခြားနဲ့ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ခေါ်ယူရေး၊ ဝင်လာတဲ့ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းတွေ အခြေချနိုင်အောင် ...
အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာအသင်းအဖွဲ့များမှ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း
အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာအသင်းအဖွဲ့များမှ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့က NYDC မှ ဦးစီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း၊ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာပညာရှင်များအသင်းနဲ့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Technical Roundtable) ကို မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို NYDC ရဲ့ Planning and ...
SEMP, Urban Master Planning နှင့် NYDC ၏ တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
SEMP, Urban Master Planning နှင့် NYDC ၏ တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ရန်ကုန်မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ NYDC ရဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အများသိရအောင် ပြောပြပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပတ်စဉ်စာစဉ်တွေ မထုတ်ဖြစ်တာ နည်းနည်းကြာသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါကကျွန်တော်တို့ ဘာမှလုပ်မနေဘဲ လုပ်ငန်းတွေရပ်နေတဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ သြဂုတ်လဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်မတန်အလုပ်များခဲ့တဲ့လ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စာရွက်စာတမ်း ...